Facebook အကောင့်တခုကိုဘယ်လိုပယ်ဖျက်မလဲ မိုဘိုင်းဖိုရမ်
Ignacio Sala | | Facebook က, social networking
သင်အချိန်ရောက်လာပြီထင်လျှင် သင်၏ Facebook အကောင့်ကိုဖျက်ပစ်ပါသင်သည်ဤပလက်ဖောင်းကိုအသုံးပြုခြင်းကိုရပ်တန့်လိုက်ခြင်းကြောင့်သင်သည် Mark Zuckerberg အတွက်အချက်အလက်အရင်းအမြစ်အဖြစ်ဆက်လက်မနေလိုတော့ပါ။ သို့မဟုတ်မကြာခဏဖြစ်ပျက်နေသောအရာများကိုတွေ့ရ။ ပင်ပန်းပါသည်၊ ဤဆောင်းပါးတွင်ကုမ္ပဏီအတွက်အကျိုးဆက်များမရှိဘဲလုံခြုံရေးအရှုပ်တော်ပုံအသစ်တစ်ခုကိုဖော်ထုတ်နိုင်ခဲ့သည်။ သင်လိုက်နာရန်ခြေလှမ်းများကိုပြသသွားတယ်။
ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်အကောင့်ကိုပိတ်လိုက်ခြင်းကဖိနှိပ်ချုပ်ခြယ်မှုအားဖြင့်လှုံ့ဆော်ပေးနိုင်သည်။ ဒီပလက်ဖောင်းပေါ်ရှိအကောင့်ကိုပိတ်ခြင်းဆိုသည်မှာ ကျွန်ုပ်တို့ထုတ်ပြန်ခဲ့သောပုံများ၊ ဗီဒီယိုများနှင့်သတင်းအချက်အလက်အားလုံးဆုံးရှုံးသည် ဤလူမှုရေးကွန်ယက်တွင်ကျွန်ုပ်တို့ယခင်အရန်ကူးထားခြင်းကိုမပြုလုပ်သရွေ့
သင်၏ Facebook အကောင့်ကိုခေတ္တမဖျက်ခင်သို့မဟုတ်အလုပ်မလုပ်မီ၊ သင့်အားမည်ကဲ့သို့သင်ပြသည့်အခြားဆောင်းပါးများကိုသင်ကြည့်ချင်ပေမည်။ ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်မှဗွီဒီယိုများကူးယူပါ, ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်ပေါ်မှာ avatar တစ်ခုဖန်တီးနည်း, ဘယ်လိုသိရန် အဘယ်သူသည်ငါတို့၏ပရိုဖိုင်းကိုသွားရောက်ကြည့်ရှု, သူတို့သည်သင့်ကိုဆီးတားကြလျှင်၊ သို့မဟုတ်အကြောင်းပြချက်နှင့်ဖြေရှင်းချက်သည့်အခါ Facebook ကအလုပ်မလုပ်ပါဘူး.
1 အကောင့်နှင့် Facebook အကောင့်ကိုပယ်ဖျက်ပါ
2 ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်တွင်တင်ထားသောအကြောင်းအရာအားလုံးကို download လုပ်နည်း
3 Facebook အကောင့်ကိုဘယ်လိုပိတ်ရမလဲ
5 Facebook အကောင့်ကိုဖျက်ပစ်နည်း
6 ပယ်ဖျက်ခဲ့တဲ့ Facebook အကောင့်ကိုဘယ်လိုဆယ်တင်မယ်နည်း
အကောင့်နှင့် Facebook အကောင့်ကိုပယ်ဖျက်ပါ
ကျွန်ုပ်တို့၏ Facebook အကောင့်ကိုဖျက်သိမ်းခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်နှင့် ပတ်သက်၍ ကျွန်ုပ်တို့သိထားသင့်သည့်ပထမ ဦး ဆုံးအရာမှာကုမ္ပဏီဖြစ်သည် ကျွန်တော်တို့ကိုရွေးချယ်စရာနှစ်ခုပေးထားပါတယ်:
Facebook အကောင့်ကိုပိတ်ထားပါ ဆိုလိုတာကလူမှုကွန်ယက်ပျောက်ကွယ်သွားတာပေါ့၊ ဒါကြောင့်ဘယ်သူမှငါတို့ကိုရှာမှာမဟုတ်ဘူး၊ ငါတို့ရဲ့အတ္ထုပ္ပတ္တိကိုကြည့်ပြီးငါတို့ကိုစာတွေပို့ပေးမှာမဟုတ်ဘူး။ ဒီဖြစ်စဉ်ကငါတို့လိုချင်တဲ့အချိန်မှာ၊ ငါတို့ပြန်လာဖို့အဆင်သင့်ဖြစ်ရင်ပလက်ဖောင်းပေါ်မှာငါတို့ရဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေကိုပြန်လည်စတင်ခွင့်ပေးတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့အကောင့်ကိုရပ်ဆိုင်းသည်အထိကျွန်ုပ်တို့ရရှိထားသောအချက်အလက်အားလုံးနှင့်သုံးစွဲသူများအားလုံးထံ၌ရှိသည်။
အကောင့်ပိတ်ထားရင်တောင်, ကျွန်ုပ်တို့၏မိတ်ဆွေများကကျွန်ုပ်တို့အားပွဲများသို့ဖိတ်ကြားမှုများပေးပို့ခြင်း၊ ဓာတ်ပုံများဖြင့် tag လုပ်ခြင်းသို့မဟုတ်အုပ်စုများသို့ဖိတ်ကြားခြင်းများပြုလုပ်နိုင်သည်။
Facebook အကောင့်ကိုဖျက်ပါ ပလက်ဖောင်းကိုလုံးဝနှုတ်ဆက်ဖို့ပါ။ ဤလုပ်ငန်းစဉ်သည်အကောင့်အားရပ်ဆိုင်းခြင်းနှင့်မတူဘဲပြန်လည်ပြုပြင်။ မရ၊ ဆိုလိုသည်မှာကျွန်ုပ်တို့သည်ကျွန်ုပ်တို့ထုတ်ဝေလိုက်သောအကြောင်းအရာများအားလုံးနှင့်အတူပလက်ဖောင်းသို့ပြန်ရန်အခွင့်အရေးမရှိပါ။ ဖေ့စ်ဘွတ်ကမင်းကိုစိတ်ပြောင်းစေပြီးသင့်အကောင့်ကိုပြန်လည်ရယူရန် ၁၄ ရက်အချိန်ပေးသည်။
ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်မှမပယ်ဖျက်နိုင်သောတစ်ခုတည်းသောအချက်အလက်များမှာအခြားသူများနှင့်ကျွန်ုပ်တို့ပြောဆိုနိုင်ခဲ့သည့်စကားဝိုင်းများဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏အချက်အလက်အားလုံးကိုဖေ့စ်ဘွတ်ခ်မှအာမခံသောအချိန်ကာလမှာဖြစ်သည် 90 ရက်။
ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်တွင်တင်ထားသောအကြောင်းအရာအားလုံးကို download လုပ်နည်း
ဆက်လက်မလုပ်ဆောင်မီ ကျွန်ုပ်တို့၏ Facebook အကောင့်ကိုဖျက်ပါပထမ ဦး ဆုံးလုပ်ရမှာကဒီလူမှုကွန်ယက်မှာပုံတွေ၊ ဗီဒီယိုတွေနဲ့စာပေတွေအားလုံးကိုငါတို့ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေတဲ့အရာအားလုံးရဲ့ backup တခုဖြစ်တယ်။
သင်တစ် ဦး အနေဖြင့်ပြန်ဆင်းမီ ရှည်လျားပြီးအလွန်ပင်ပန်းနိုင်ပါတယ်သောလုပ်ငန်းစဉ်သင်သိထားသင့်သည်မှာ Facebook သည်ကျွန်ုပ်တို့အားဤလုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုလုံးကိုအလိုအလျောက်လုပ်ဆောင်ရန်ခွင့်ပြုသည့်ကိရိယာတစ်ခုရရှိနိုင်ကြောင်းသိစေသည်။
မသန်စွမ်း Facebook ကိုအရန်ကူးခြင်းအောက်တွင်ဖော်ပြထားသောအဆင့်များကိုကျွန်ုပ်တို့လိုက်နာရမည်။
ပထမတစ်ခုကတော့ Facebook စာမျက်နှာကိုကျွန်ုပ်တို့၏ browser မှတစ်ဆင့်ရယူရန်နှင့်ရွေးချယ်စရာများကိုရယူရန်ဖြစ်သည် configuration ကို နှင့် privacy - ချိန်ညှိခြင်း.
ဖွဲ့စည်းမှုအတွင်းတွင်ကိုနှိပ်ပါ သင်၏ Facebook အချက်အလက်.
ညာဘက်ကော်လံတွင်, အပေါ်ကိုကလစ်နှိပ်ပါ သင်၏အချက်အလက်များကိုရယူပါ.
ရက်စွဲအကွာအဝေးဖြေ - ကျွန်တော့်ရဲ့ဒေတာအားလုံး
ပိုကောင်းတယ် HTML format ကိုရွေးပါ JSON အစား၊ ငါတို့ဟာဒေတာအားလုံးကိုဖြတ်သန်းပြီး link တစ်ခုမှတဆင့်သွားလာခွင့်ပြုမှာပါ။
El JSON ပုံစံ၎င်းသည်မည်သည့်လျှောက်လွှာတွင်မဆိုဖွင့်နိုင်သည့်စာသားသက်သက်ပုံစံဖြစ်သော်လည်း၎င်းတွင် link မပါ ၀ င်သောကြောင့်၎င်းတွင်ပါဝင်သည့်အကြောင်းအရာများကိုအလွယ်တကူရှာဖွေနိုင်ခြင်းမရှိပါ။
နောက်မှကျွန်ုပ်တို့အကောင့်အချက်အလက်အားလုံး (ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေမှုများ၊ ဓာတ်ပုံများနှင့်ဗွီဒီယိုများ၊ မှတ်ချက်များ၊ သူငယ်ချင်းများ ... ) ကိုအတည်ပြုရမည်။ မှတ်သားထားပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့မသိမ်းလိုသောသတင်းအချက်အလက်ရှိပါကသက်ဆိုင်ရာအကွက်ကိုအမှတ်အသားပြုနိုင်သည်။
အဲဒီအချိန်တုန်းက အီးမေးလ်လက်ခံရရှိလိမ့်မည် ကျွန်ုပ်တို့၏သတင်းအချက်အလက်မိတ္တူတစ်စောင်တောင်းခံသည့်အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်။
အရန်ကူးခြင်းကိုဖန်တီးသောအခါ (၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့ထုတ်ပြန်ခဲ့သည့်အကြောင်းအရာပမာဏပေါ်မူတည်သည်), ကျနော်တို့ link တစ်ခုနှင့်အတူအီးမေးလ်အသစ်တစ်ခုကိုလက်ခံရရှိလိမ့်မည် အကြောင်းအရာ download လုပ်ပါရန်။
ကျွန်ုပ်တို့ Facebook ၏ပင်မစာမျက်နှာတွင်ရောက်သည်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ပုံကို နှိပ်၍ configuration ကိုရွေးနိုင်သည် configuration ကို နှင့် privacy - ချိန်ညှိခြင်း.
လက်ဝဲကော်လံတွင်, အပေါ်ကိုကလစ်နှိပ်ပါ သင်၏ Facebook အချက်အလက်။ အခုငါတို့ညာဘက်ကော်လံကိုသွားပြီးအပေါ်ကိုကလစ်နှိပ်ပါ ပိတ်ခြင်းနှင့်ဖယ်ရှားခြင်း.
နောက်စာမျက်နှာပေါ်တွင်နှိပ်ပါ အကောင့်အားပိတ်ထားပါ နှင့်ကျွန်တော်ကိုက်ညီ အကောင့်ပိတ်ခြင်းသို့သွားပါ.
နောက်မှကျွန်ုပ်တို့သည်အကောင့်၏တရားဝင်ပိုင်ရှင်များဖြစ်ကြောင်းအတည်ပြုရမည် ကျွန်တော်တို့ရဲ့စကားဝှက်ကိုရိုက်ထည့်။ ဤအလယ်အလတ်ဖြစ်စဉ်သည်ဘရောင်ဆာတစ်ခုတွင်ဖွင့်ထားသောဖေ့စ်ဘွတ်ခ်အကောင့်ကိုသုံးသူမည်သူမဆိုအကောင့်ကိုပိတ်ခြင်းသို့မဟုတ်ဖျက်ခြင်းမှကာကွယ်ရန်ဖြစ်သည်။
နောက်ဆုံးတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်အကောင့်အားခေတ္တရပ်ဆိုင်းလိုသည့်အကြောင်းရင်းကိုကျွန်ုပ်တို့ဖော်ပြရမည်။ (ဤအဆင့်ကိုကျော်။ မရပါ) ကျွန်ုပ်တို့အကောင့်အားရပ်ဆိုင်းစေသည့်အကြောင်းရင်းများကိုအသေးစိတ်ထည့်ရန်ကျွန်ုပ်တို့တွင်ရွေးချယ်ခွင့်လည်းရှိသည်။
ကျွန်ုပ်တို့အကောင့်အားရပ်ဆိုင်းထားလျှင်ပင်ကျွန်ုပ်တို့၏မိတ်ဆွေများနှင့်မိသားစုသည်ဖြစ်ရပ်များကိုဖိတ်ရန်၊ ဓာတ်ပုံများဖြင့် tag လုပ်ရန်နှင့်အုပ်စုများကိုဖိတ်ရန်ပြုလုပ်နိုင်သည်။ အကောင့်အားပိတ်ထားခြင်းအားဖြင့်၊ ဤအသိပေးချက်များကိုလက်ခံရရှိရန်တစ်ခုတည်းသောနည်းလမ်းမှာအီးမေးလ်အကောင့်မှဖြစ်သည်။ သို့ဆိုလျှင် box ကိုမစစ်ဆေးသင့်ပါ Facebook မှအီးမေးလ်များကိုလက်ခံခြင်းကိုရပ်ပါ.
Facebook Messaging Platform ကိုအသုံးပြုလိုပါကထို box ကိုအမှန်ခြစ်ပေးပါ Messenger ကိုသုံးပါ။ အကောင့်ဖွင့်ထားသည့်အချိန်တွင်ပရိုဖိုင်းပုံသည်ကျွန်ုပ်တို့အသုံးပြုခဲ့သောဓာတ်ပုံနှင့်အတူတူပင်ဖြစ်ပါလိမ့်မည်။
နောက်ဆုံးတွင်ကျွန်ုပ်တို့ကလစ်နှိပ်ပါ ပိတ်ထားသည်။ ကျနော်တို့ဖတ်နိုင်သည့်နောက်ဆုံးစာကိုပြလိမ့်မည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ Facebook အကောင့်ကိုပြန်လည်အသက်သွင်းရန်လုပ်ဆောင်မှုသည် platform ပေါ်တွင်ကျွန်ုပ်တို့၏အကောင့်အချက်အလက်များကိုပြန်လည်ထည့်သွင်းသကဲ့သို့ရိုးရှင်းပါသည်။ အဲဒီအချိန်မှာဖေ့စ်ဘွတ်ကကျွန်တော်တို့ကိုဖိတ်တဲ့စာကိုပြလိမ့်မယ် အကောင့်ကိုပြန်လည်အသက်သွင်းသည် ငါတို့အရင်ကပိတ်ထားခဲ့
နောက်စာမျက်နှာပေါ်တွင်နှိပ်ပါ ဖျက်ပစ် နှင့်ကျွန်တော်ကိုက်ညီ အကောင့်ဖျက်မှုသို့သွားပါ.
Messenger ကိုဆက်လက်အသုံးပြုရန်အကောင့်အားပိတ်ထားပါ (ပြီးခဲ့သည့်အပိုင်းတွင်ကျွန်ုပ်တို့ရှင်းပြခဲ့သောဖြစ်စဉ်)
ကျွန်ုပ်တို့မှပေးထားသောရွေးချယ်မှုနှစ်ခုကိုကျွန်ုပ်တို့ထည့်သွင်းစဉ်းစားပြီးပါက Delete account ကိုနှိပ်ပါ။
နောက်မှကျွန်ုပ်တို့သည်အကောင့်၏တရားဝင်ပိုင်ရှင်များဖြစ်ကြောင်းအတည်ပြုရမည် ကျွန်တော်တို့ရဲ့စကားဝှက်ကိုရိုက်ထည့် အောက်ပါစာတိုကိုပြလိမ့်မည် -
သင်၏အကောင့်ကိုအပြီးတိုင်ဖျက်တော့မည်။ သင်လုပ်ရန်အဆင်သင့်ရှိလျှင်“ Delete account” ကိုနှိပ်ပါ။ ယခုမှ စ၍ သင့်အားပြန်လည်အသက်သွင်းရန်နှင့်ဖျက်ခြင်းကိုပယ်ဖျက်ရန်ရက် ၃၀ သင်ရှိသည်။ ဒီရက် ၃၀ ကာလပြီးနောက်ဖယ်ရှားရေးလုပ်ငန်းစဉ်စတင်မည်ဖြစ်ပြီးသင်ထည့်လိုက်သောမည်သည့်အကြောင်းအရာနှင့်အချက်အလက်ကိုမျှပြန်လည်ရယူနိုင်လိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။
ယခုအချိန်တွင် ငါတို့မှာရက်ပေါင်း ၃၀ ရှိတယ် ကျွန်ုပ်တို့ပယ်ဖျက်ထားသောအကောင့်ကိုပြန်လည်ရယူရန်။
ပယ်ဖျက်ခဲ့တဲ့ Facebook အကောင့်ကိုဘယ်လိုဆယ်တင်မယ်နည်း
ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်အကောင့်ကိုဖျက်ချင်တယ်ဆိုတာအတည်ပြုပြီးမှ ပြန်ယူဖို့ရက် ၃၀ ရှိတယ်။ အဲဒီလိုလုပ်ဖို့အတွက်အသုံးပြုတဲ့အီးမေးလ်အကောင့်နဲ့စကားဝှက်ကိုရိုက်ထည့်ရုံပါပဲ။
အကောင့်လုံးဝဖျက်သိမ်းသည်အထိကျန်ရှိသောရက်များကိုဖော်ပြလိမ့်မည်။ အကောင့်ဖယ်ရှားခြင်းကိုပယ်ဖျက်လိုပါကကိုနှိပ်ပါ ဖျက်မှုဖျက်သိမ်းပါ.
ရက်ပေါင်း ၃၀ ကျော်ကုန်လွန်ခဲ့လျှင်၊ သင်၏ Facebook အကောင့်ကိုပြန်လည်ရယူနိုင်မည်မဟုတ်ပါ အကယ်၍ သင်ပလက်ဖောင်းကိုပြန်ချင်တယ်ဆိုရင်စပြီးမှစရပါလိမ့်မယ်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - မိုဘိုင်းဖိုရမ် » social networking » Facebook အကောင့်ကိုဘယ်လိုဖျက်မလဲ
NAS ဆာဗာဆိုတာဘာလဲ၊ ဘယ်လိုအလုပ်လုပ်လဲ၊ ဘာအတွက်လဲ။